Trip To Arakan, Sittwe & Myauk Oo | My Burmese Blog
Trip To Arakan, Sittwe & Myauk Oo	On April 24, 2011	by Htoo Tay Zar	With	12 Comments	- Myanmar	၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်​နေ့​က ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့​ဘက်​ကို အလည်​အပတ်​သွား​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ခရီး​က အမှန်​တော့ ထွက်​ဖို့ စီစဉ်​ထား​တာ​မဟုတ်​ပေ​မယ့် ဦး​လေး​က အဲ​ဒီ​ဘက်​ကို အလုပ်​ကိစ္စ​နဲ့ သွား​စရာ​ရှိ​တာ​ကြောင့် လိုက်​သွား​ဖြစ်​တာ​ပါ။ ရခိုင်​ဆို ငပလီ၊ သံ​တွဲ​ဘက် ငယ်⁠ငယ်​တုန်း​က ရောက်​ဖူး​ပေ​မယ့် စစ်​တွေ​ကို​တော့ မ​ရောက်​ဖူး​တာ​ကြောင့် ပထမ​ဆုံး အကြိမ်​ဖြစ်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​တုန်း​က ခရီးသွား​နေ​တယ် ဆို​ပေ​မယ့် ဘ​လော့ဂ်​မှာ​က schedule post လုပ်​ထားခဲ့​တာ​မို့ ကွ​ျန်တော်​မ​ရှိ​ပေ​မယ့် တစ်​နေ့ post တစ်​ပုဒ်​တော့ တက်​နေ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ စစ်​တွေ​ကို သွား​ဖို့​အတွက် ပြည်​တွင်း​လေ​ကြောင်း​လိုင်း​မှာ လက်မှတ်​ဝယ်​ရ​ပါ​တယ်။ ရုံး​က ပန်းဆိုး​တန်း အောက်​ဘ​လောက် Strand Hotel နား​မှာ​ပါ။ အဲ​ဒီ​မှာ လေ​ယာဉ်​လက်မှတ်​ဝယ်​ပြီး နောက်​ရက်​မှာ စ​ထွက်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ စစ်​တွေ​သွား​မယ့် ဂျက်​လေ​ယာဉ်​က တစ်​စီး​တည်း​သော လေ​ယာဉ်​လို့ သိ​ရ​ပြီး စစ်​တွေ၊ အမ်း နဲ့ အခြား မြန်မာ​နိုင်ငံ အနှံ့​ကို ပျံ​နေ​တာ​လို့ သိ​ရ​ပါ​တယ်။ တော်တော်​လဲ အလုပ်​လုပ်​နိုင်​တဲ့ လေ​ယာဉ်​ပါ​ပဲ။
စစ်တွေမြို့​လေ​ဆိပ်​က မြို့​နဲ့ နီး​ပါ​တယ်။ ပြော​ရ​ရင် မြို့​ထဲ​လို့​တောင် ပြော​လို့ ရ​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​မှာ လေ​ယာဉ်​ဆင်း​ပါ​တယ်။ စစ်တွေမြို့​ဟာ ခဏ​တိုင်း သ​တင်း​တွေ​ထဲ​ပါ​နေ​ကြ​ဆို​တော့ အရမ်း​ကြီး​တိုးတက်​နေ​မယ် မျော်​လင့်​ထား​ပေ​မယ့်။ စိတ်ကူး​ထဲ​က​လို မဟုတ်​သေး​တာ တွေ့​ရ​ပါ​တယ်။ မြို့​မှာ ကို​လို​နီ​ခေတ်​က လက်ရာ​နဲ့ အဆောက်​အဦး​တွေ အများ​ကြီး ရှိ​ပြီး ရှေး​တုန်း​က နာရီ​စင်​ကြီး တစ်​ခု​လဲ တွေ့​ပါ​တယ်။ နောက် စစ်​တွေ မြို့​မှာ ပင်လယ်ကမ်းခြေ​လဲ ရှိ​ပါ​တယ်။ ညနေ​ဘက် တစ်​ရက်​အရောက်​သွား​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ကံဆိုး​ချင်​တော့ ကင်​မ​ရာ​အပြည့်​အစုံ​ယူသွား​ပြီး မမ်​မို​ရီ​ကတ်​က တည်းခို​ဆောင်​မှာ ကျန်​ခဲ့​လို့ ကမ်းခြေ​ရောက်​မှ ကား​နဲ့ ပြန်ယူ​ရ​ပါ​သေး​တယ်။
စစ်​တွေ ကမ်းခြေ​က သောင်ပြင်​အတော်​ကျယ်​ပါ​တယ်။ ဒီ​ဘက်​ကမ်း​နား​မှာ ပလပ်​စ​တစ်​အိတ် အမိှ​ုက်​တွေ အရမ်း​များ​တာ​ကြောင့် လှ​ချင်​ရက်​နဲ့ ဓာတ်​ပုံ​ရိုက်​လို့ မ​ရ​ပါ​ဘူး။ ရေစပ်​နား​မှ ရိုက်​လို့ ရ​တယ်။ ကမ်းခြေ​နဲ့ တစ်ဖက် ၁ မိုင်​လောက် အကွာ​မှာ​တော့ view point ရှိ​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​ဘက် ဓာတ်​ပုံ​သွား​ရိုက်​ဖို့ ရောက်​ပေ​မယ့် january လ​ဖြစ်​ပြီး ညနေ​လောက်​မှာ​တင် မြူ​တွေ အရမ်း​ကျနေ​တာ​ကြောင့် ဘာ​မှ ရိုက်​လို့ မ​ရ​ခဲ့​ပါ​ဘူး။ View point က ဝင်း​ဦး​ကား​ထဲ​မှာ ပါ​ဘူး​တဲ့ နေရာ​ပါ ဘေး​မှာ ကျောက်ဆောင် အလှ​တွေ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ကို​လို​နီ​ခေတ် အမြောက်​တစ်​ခု​လဲ တွေ့​ရ​တယ်။ တစ်ဖက်​က ၄ ဖာ​လုံလောက် ပင်လယ်​ဘက်​မှာ ကွ​ျန်း​အသေး​လေး​ရှိ​ပြီး အလုပ်​လုပ်​တဲ့ မီးပြတိုက် တစ်​ခု​ရှိ​ပါ​တယ်။ မြူ​တွေ​ကျနေ​တာ​ကြောင့် ဘယ်​လို​မှ ရိုက်​မ​ရ​ခဲ့​ပါ​ဘူး။
နောက်​ရက်​တွေ​မှာ မြောက်​ဦး မြို့​ဘက်​တွေ​ကို ထွက်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ လမ်း​မှာ ရထား​လမ်းဖောက်​နေ​တာ​ကို​တွေ့​ရ​ပါ​တယ် လမ်း​က ပုဏ္ဍား​ကွ​ျန်း​မြို့ အကျော်​ထိ ရထား​ပြေး​လို့ ရ​နေ​ပါ​ပြီ။ တစ်ဖက် ကျောက်တော် အထိ​ရောက်​အောင် ဖောက်​နေ​တာ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ်။ ကား​မောင်း​ပို့​ပေး​တဲ့ အကိုကြီး​က အဲ​ဒီ​ဘက်​မှာ အရင်​က သွား​ရေး​လာ​ရေး ခက်ခဲ​တဲ့ အကြောင်း ပြော​ပြ​ပါ​တယ်။ အခု​ရထား ရှိ​လာ​တော့​မှာ ၁ ယောက် ၂​၀​၀ နှုန်း​နဲ့ စစ်​တွေ​ကို ရောက်​ဖူး​တဲ့​သူ​တွေ ရှိ​လာ​တယ်​လို့ ပြော​ပါ​တယ်။ အရင်​က မိုင် ၂​၀ လောက်​ပေ​မယ့် မြစ်​တွေ ချောင်း​တွေ များ​တော့ သေ​သာ​သွား​တယ် စစ်​တွေ မ​ရောက်​ဖူး​သူ​တွေ ရှိ​တယ်​လို့ ပြော​တယ်။
စစ်​တွေ မြောက်​ဦး ကား​လမ်း​က လမ်း​အတော်​ကျဉ်း​တာ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ်။ လမ်း​မှာ သတိထား​မိ​သ​လောက် ဆိုင်​ကယ်​သွား​တာ​တောင် ရှား​ပါ​တယ်။ ကွ​ျန်တော် သွား​ခဲ့​တဲ့ အသွား​အပြန်​မှာ လမ်း​မှာ ကျော်​ရ​တာ​ကော၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်​လာ​တဲ့ ကား​ကော ၁​၀ စီး​လောက်​ပဲ​ရှိ​ပါ​တယ်။ အမှန်​အတိုင်း​ပြော​ရ​ရင် မ​တိုးတက်​သေး​ပါ​ဘူး။
သွား​ရင်း​နဲ့ ခရီး​တစ်ဝက်​လောက်​မှာ ကျောက်တော်​မြို့​ကို ဖြတ်​ရ​ပါ​မယ်။ နောက်​တော့ ကုလား​တန် မြစ်​ကို ဖြတ်ဆောက်​ထား​တဲ့ ကစ္စ​ပ​န​ဒီ တံတား​ကို ဖြတ်​ရ​ပါ​တယ်။ တစ်​ဘက်​ကမ်း​မှာ​တော့ တောင်​တစ်​လုံး​ရှိ​ပြီး တောင်ပေါ်​မှာ ဘုရား​တစ်​ဆူ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ဒါ​နဲ့ အဲ​ဒီ​တောင်​ကို ကား​နဲ့ တက်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ တောင်​တစ်​တောင်​လုံး​ဟာ မျောက်​တွေ​ကို ဘေးမဲ့ပေး​ထား​တာ​မို့ မျောက်​ကောင်​ရေ ၁​၀⁠၀ ကျော်​လောက်​ရှိ​လောက်​မယ့် အရေအတွက်​ကို တွေ့​ခဲ့ ရ​ပါ​တယ်။ တောင်ပေါ်​က​နေ ဓာတ်​ပုံ​ရိုက်​ပြီး ပြန်​ထွက်​ကြ​ပါ​တယ်။ ကျောက်​တောင်​က​နေ ၁​၀ မိုင်​လောက် သွား​ပြီး​တဲ့ အခါ​မှာ​တော့ တန်ခိုးကြီး မဟာ မြတ်​မု​နိ​ဘုရား​ကို ရောက်​ပါ​တယ်။ ဒီ​ဘုရား​ဟာ ကို​လို​နီ​ခေတ်​က အမြောက်​ဆံ လုပ်​ဖို့ သယ်ယူ​ခံ​ခဲ့​ရ​တာ​ဖြစ်​ပြီး ဘုရား​တန်​ခိုးတော် နဲ့ အိမ်မက်​တွေ​မျက်​မြင်​ပြီး နောက်​ပိုင်း​မှာ​မှ အဂ​လိပ်​တွေ ကိုယ်တိုင် ဒီ​နေရာ​ကို ပြန်​ပင့်​ဆောင်​လာ​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ နောက်​တော့ ကွ​ျန်တော်​တို့ မြောက်​ဦး​ဘက်​ကို ဆက်​ထွက်​ဖြစ်​ကြ​ပါ​တယ်။ ဘုရား​က​နေ ကျော်​လာ​တာ​နဲ့ နောက်​ပိုင်း​မှာ လမ်း​က ပို​ကြမ်း​လာ​ပါ​တယ်။ ကျောက်ခဲ​တွေ ပွ​စိ​ထ​နေ​တဲ့ လမ်းပေါ်​မှာ လိှ​ုင်း​စီး​နေ​ရသ​လို သွား​ရ​ပါ​တယ်။ လမ်း​မှာ တွေ့​ရ​တဲ့ တံတား​တွေ​က​လဲ ကို​လို​နီ​ခေတ်​က ဆောက်​ခဲ့​ဟန်​တူ​တဲ့ သံ​ဘောင်​နဲ့ အနီ​ရောင် တံတား​ကြီး​တွေ​ပါ။ လမ်း​ကြမ်း⁠ကြမ်း​ကို သွား​ပြီး​ရင်​တော့ မြောက်​ဦး​မြို့​ကို ရောက်​ပါ​တယ်။ မြောက်​ဦး​မြို့​ဟာ မြို့​ထဲ​မှာ တင်​ကို ရှေး​ဟောင်း​ဘုရား​တွေ အများ​ကြီး​ရှိ​တဲ့ မြို့​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ နိုင်ငံ​ခြား​သား တစ်​ချို့ တွေ့​ရ​ပေ​မယ့် နည်း⁠နည်း​သာ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ပုံ​မှန်​ပြည်​တွင်း ခရီးသွား​ကတော့ လုံး​ဝ မ​ရှိ​သ​လောက်​ပါ​ပဲ။ သျှစ်​သောင်း​ဘုရား နဲ့ အခြား ဘုရား​တွေ လှည့်​ဖူး​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဘုရား​အများ​စု​ဟာ ကို​လို​နီ​ခေတ်​မှာ လက်နက်​လုပ်​ဖို့ အတွက် သယ်​ဆောင်​လုယူ​ခံ​ရ​တာ​ကြောင့် အချို့ ကြေး​ဆင်းတု​ဘုရား​ကြီး​တွေ​ကို ရွံ​နဲ့ မံ​ပြီး အုတ်​ဘုရား​ပုံစံ ပြောင်း​ခဲ့​ရ​တာ​တွေ၊ မြစ်​အောက်​ထဲ​မှာ​ဖွက်​ထားခဲ့​ကြ​ရ​တဲ့ သမိုင်း​တွေ​များ​ပါ​တယ်။ မြောက်​ဦး​မြို့​မှာ နန်းတော်​ရာ နဲ့ ပြ​တိုက်​ကို​လဲ လေ့​လာ​လို့ ရ​ပါ​တယ်။
မြောက်​ဦး​မြို့​ဟာ ရှေး​ဟောင်း​ယဉ်ကျေး​မှု​တွေ လေ့​လာ​လို့ ရ​တဲ့ မြို့​ဖြစ်​ပေ​မယ့် သွား​လာ​ရ​ခက်ခဲ​တာ ကြောင့် နိုင်ငံ​ခြား​သား​ရော ပြည်​တွင်း ဧည့်​သည်​ပါ နည်း​ဟန်​တူ​ပါ​တယ်။ နောက် အစားအသောက်​လဲ ထူး​ထူးဆန်း​ဆန်း​ရှား​ပါ​တယ်။ တစ်​ည​က အထူး ရှားပါး ရေကြက်​ဟင်း ဆို​ပြီး ကွ​ျန်တော်​တို့​ကို ချက်​ကြေ​ွး​ပါ​သေး​တယ်။ တကယ်​တန်း ပန်းကန်​ရောက်လာ​တော့​မှာ ရေကြက်​ဆို​တာ ပြည်​ကြီး​ငါး ကင်း​မွန် တွေ​ဖြစ်​နေ​တာ တွေ့​ရ​တယ်။ မြို့​ရဲ့ နာမည်ကြီး number 1 ဆို​လား စား​သောက်​ဆိုင်​ဟာ စားပွဲ ၄ လုံး​သာသာ ပဲ​ဆံ့​တဲ့ ဆိုင်​သေး​လေး​ဖြစ်​နေ​တာ​လဲ တွေ့​ရ​ပါ​တယ်။
မြောက်​ဦး မြို့​မှာ ၁ ည အိပ်​ပြီး​တဲ့ နောက်​တော့ စစ်​တွေ​ကို ပြန်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဒီ​ခရီး​စဉ်​က ဓာတ်​ပုံ ကောင်း​ကောင်း မ​ရို​က​လိုက်​ရ​ပါ​ဘူး။ ဆောင်း​မ​ကုန်သေး​တာ​ကြောင့် ညနေ နဲ့ မနက်​မှာ မြူ​တွေ ထ​နေ​တာ​ကြောင့် ရိုက်​လို့ မ​ရ​ခဲ့​ပါ။ ခရီး​စဉ်​ဟာ​လဲ ဖုန်​အတော်​ထူ​ပါ​တယ်.. ကင်​မ​ရာ မှန်ဘီလူး​လဲ​ရင်း​နဲ့ ဘယ်​နား​က အမှုန်​မှန်း​မ​သိ​တာ​က မှန်​အောက်​က censor ပေါ်​တည့်⁠တည့်​တက်ကပ်​သွား​လို့ ည​ဘက်​အတော် ရှင်း​ယူ​လိုက်​ရ​သေး​တယ်။ ဒါ​တောင် မှန်ဘီလူး​လဲ​ရင် ကား​မှန် အကုန်​ပိတ်​ထား​တာ​ပါ။ စစ်​တွေ မှာ​တော့ မ​ပြန်​ခင် ညနေ​ဘက်​ထပ်​ပြီး view point ထပ်​သွား​ဖြစ်​တော့ လေ​ယာဉ်​တစ်​စင်း ပျံ​သွား​တာ အနောက်​ဘက်​မှာ အင်​ဂျင်​အပူ​ရှိန်​နဲ့ ရေ​ေ​ငွ့​တိမ်​တန်း​ကြီး ဖြစ်​ကျန်​နေ​တာ​တွေ့​တာ​နဲ့ အကြံရ​ပြီး ညီ​ဝမ်း​ကွဲ​ကို တိမ်​တွေ မှုတ်​ထုတ်​နေ​တဲ့ ပုံလုပ်​ခိုင်း​ပြီး ရိုက်​ခဲ့​သေး​တယ်။ အဲ​ဒီ​ပုံ​တော့ သဘောကျ​တယ် perspective ကော mood ကော ကွက်​တိ​ဖြစ်​သွား​လို့​ပါ။ အခု​ကတော့ အဲ​ဒီ ခရီး​စဉ်​က ပုံ​တွေ​ပါ။ ခရီး​စဉ်​သွား​တဲ့ အတိုင်း စီ​ထား​တာ​ပါ။ ရှု​စား​ကြ​ပါ​ဦး… Share this:FacebookTwitterGooglePinterestPocketEmail	Burma, Journey, Personal, Photography	12 Comments	kma
ပုံတွေ အားလုံး အရမ်းကြိုက်ပါတယ်..။ မျှဝေ ခံစားခွင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုထူးတေဇာ။ မြောက်ဦးကို စင်ရော်မောင်မောင်ရိုက်တဲ့ ပေါ်လစီကားကြည့်ပြီးကတည်းက သွားလည်ချင်နေတာ..။ အခြေအနေပေးရင် တနေ့နေ့ပေါ့လေ..
ပုံတွေ ကောင်းတယ်။ အဲဒိကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးဘူး။ နောက်ဆုံးပုံလေးကတော့ 🙂
Great shots bro! Keep it up!
ပုံတွေခိုက်တယ်ဗျာ။ အဲဒီဖက်ကို တစ်ခေါက်မှမရောက်ဖူးသေးဘူးဗျာ။
Love the photos! I’m half Rakhine but never hadachance to go there.
Appreciate for your photos and travel info. 😀
ဓါတ်ပုံတွေအရမ်းကောင်းတယ်. idea လည်းကောင်းတယ်.
bro..very nice photos.. i wish to go and visit there too.. =)
i have been there before .. but landscapes are sublimer in ur photos 🙂 ..
စစ်တွေ။မြောက်ဦးကို တခါမှ မရောက်ဖူးပေမဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရင်း လွမ်းသလိုလိုခံစားရတယ်…
this my home town,,
i want to show many to photo
i live in the malaysia
naxt year come back home
i show many photo
thank u (mr,msr,.brth sis and all)